Saddexda Ciyaartoy Ee Isha Lagu Hayn Doono Marka Ay Ciyaaraha Horyaalka Premier League Furmaan? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa dib loo bilaabi doonaa June 17, waxaanay ballanta ugu horreysaa tahay inay jilbaha is-daraan afar kooxood oo ay kulamo baaqi ah u yaalleen.
Manchester City ayuu imtixaan adag ugu bilaabmi doonaa horyaalku, waxaanay garoonkeeda Etihad Stadium ku qaabbili doontaa Arsenal oo uu tababare Mikel Arteta dibu-habayn ku sameeyey, isla markaana diyaar u ah inay isku tijaabiso naadiyada ka xoogga badan si ay taageereyaasha ugu muujiso inay dib usoo noolaanayso.
Aston Villa ayaa iyaduna marti-gelin doonta kooxaha laga yaabban yahay ee Shefield United oo uu hunguri kaga jiro inay ka mid noqoto shanta ama lixda kooxood ee ugu sarreeya Premier League, si ay uga qayb-gasho UEFA Euriopa League ama Champions league, halka Villa ay ka cararayso inay dib ugu noqoto heerka labaad ee Championship-ka.
Labadan kulan marka ay soo dhamaadaan, waxa si caadi ah u bilaabmi doona 90 ciyaarood oo xidhiidh ah oo ay kooxuhu geli doonaan, kuwaas oo ah in naadi walba uu isku diyaarin doono sagaal kulan oo adag oo go’aaminaya halka uu horyaalka kaga dhamaysanayo marka laga reebo Liverpool oo xilli hore diyaarsatay booskeeda koowaad iyo hanashada horyaalka intaba.
Saddex kulan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa indhaha lagu hayn doono oo ay waajib ku tahay qof walba inuu daawado, waxaanay yihiin ciyaaro xafiiltankooda iyo hadal-hayntoodu ay sii bilaabantay ka hor inta aanu horyaalkuba dib u bilaabmin.
Kooxaha Manchester City Iyo Liverpool:- Ciyaartan ayaa ku diiwaangashan toddobaadka 32.aad waxaana City uga soo horreyn doona saddex ciyaarood oo ay ka hor tegi doonto kooxaha Arsenal, Burnley iyo Chelsea laakiin Liverpool ayaa kaliya laba ciyaarood uga soo horreeyaan waxaanay la ciyaari doontaa kooxaha Everton iyo Crystal Palace, halka uu garoonka Etihad noqon karo ka ay ugu dabbaal-degayso hanashada horyaalka.
Kooxda tababare Pep Guardiola waxay dagaal u geli doontaa sidii aanay u dhici lahayn in guul ay Reds kala baxdo Etihad, halka uu Klopp la iman doono taatikadii uu hore ugu jabiyey, isla markaana uu saddexda dhibcood uga qaadan lahaa ciyaarta, garoonkana ugu dhex-damaashaadi lahaayeen ciyaartoygiisu.
Kulankan ayaa lagu tilmaamay in xamaasaddiisu ay noqonayso mid cirka ku shareeran oo qof kasta oo ciyaaraha xiiseeya uu ku qasban yahay inuu daawado.
Kooxaha Tottenham Iyo Arsenal:- Kulamada 35aad ayay isku arki doonaan, waxaana labadan kooxood ee deriska ah ay ciyaartoodu ay keeni doontaa in lagu qiimeeyo midkooda gacanta sare ku yeelan doona ciyaartan derby-ga ah. Jose Mourinho ayaa garoonka cusub ee Tottenham Hotspur Stadium kusoo dhoweyn doona Mikel Arteta oo carbisanaya xiddigo yaryar iyo kuwii ruug-caddaaga ahaa ee Gunners oo uu isku habaysanayo.
Kooxaha Leicester Iyo Manchester United:- Maalinta ugu dambaysa horyaalka Premier League ayay ku ballansan yihiin, waxaana Leicester oo ku jira kaalinta saddexaad ay garoonkeeda King Power Stadium kusoo dhamaysan kartaa guul iyo booskeeda Champions League, halka United oo laga yaabo inay Chelsea isla soo jajabaan kulamada hore ay rajadu kaga xidhnaato ciyaartan.
Saddexda Ciyaartoy ee isha Lagu Hayn Doono Marka Ay Ciyaaruhu Furmaan?
Jack Grealish: Kabtanka Aston Villa ee 24 jirka ayay kooxo badan doonayaan, gaar ahaan Manchester United oo ku qanacsan in haddii ay lasoo saxeexato ay ka heli karto toddobada gool ee uu xili ciyaareedkan u dhaliyey kooxdiisa iyo hal-abuur kale.
Arrinta ugu weyn ee isha loogu haynayo ayaa waxay tahay, haddii uu kooxdiisa Aston Villa ka badbaadin karo inay dib ugu laabato horyaalka heerka labaad ee Championship-ka.
David Silva: Halyeyga Manchester City waxa uu ku jiraa sannadkiisii ugu dambeeyey ee uu ka ciyaarayo Etihad Stadiyum, waxaanay 10-ka ciyaarood ee Premier League ee City kusoo fool leh ay noqonayaan kuwa ugu dambeeya ee uu xidhan yahay funaanadda Cirka u eg.
34 jirkan oo muddo toban sannadood ah joogay Etihad Stadium, waxay taageereyaashu si dhow ula socon doonaan dhaqdhaqaaqiisa, iyaga oo ka doodi doona haddii uu gaadhay waqtigii uu kooxda ka bixi lahaa ee ay ciyaartiisu hoos u noqonaysay iyo haddii uu go’aankiisu degdeg yahay.
Paul Pogba: Xiddiga reer France ee Paul Pogba ayaa kasoo laabanaya dhaawac muddo dheer uu ku maqnaa, waxaanu safka dhexe ee Manchester United uu la wadaagi doonaa Bruno Fernandes oo aanay wali nasiib isku yeelanin inay iska garab ciyaaraan.
Laacibkan oo heshiiskiisa United uu sannad kali ahi ka hadhsan yahay, waxa qiimayn gaar ah lagu samayn doonaa qaabka uu lasoo laabto iyo haddii uu Fernandes la abuuri karayo cudud si fiican isku fahamsan oo dhexda ka jabiya kooxaha kale.
Soomaaliya Hormar Maka Samaysay Dhanka Kubada Cagta?